SYH media player အတွက် အကူညီတောင်းခံ ခြင်း
Music & IT Development :: Category :: Knowledge Forum :: Mobile Share
Subject: SYH media player အတွက် အကူညီတောင်းခံ ခြင်း Fri Aug 06, 2010 9:50 am
အစ်ကိုတို.တွေ အားလုံးပဲ ကျွန်တော် SYH ဆိုတဲ. mediaplayer တစ်ခု ၀ယ်လိုက်တယ် ဗျာ တစ် လ မပြည့်သေးပါဘူး သူ က Menu နေရာ မရောက်တော့ဘူး ပထမတော့ စက် ခဏခဏ ဟန်း သွားတယ် ခင်ဗျ ခုတော့ Turst Our Choice လို.ရေးထားတဲ. လေး ဖြူ ပုံလေးပဲ ကြည့်နေရတော့ တယ် ကူညီ ပေး ညွှန်ပေး တဲ. ညီအစ်ကိုတို. ကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ဗျာ
ခုဟာ က တော် နှမြောဖို.ကောင်းတာ လေး သောင်းပေးဝယ်ပြီးတော့ ဘာမှတောင်မသုံးလိုက်ရသေး ဘူး ပစ္စည်း ပဲ မကောင်းလို. လား ကွှန်တော်ပဲ တော် ညံ့လို.လား တော့ မပြောတတ်တော့ ဘူး အားကိုးပါတယ် ညီအစ်ကိုတို.
Subject: Re: SYH media player အတွက် အကူညီတောင်းခံ ခြင်း Fri Aug 06, 2010 10:35 am
တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ... ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ SYH က အကြမ်းမခံဘူး..ကျွန်တော်ဆီမှာလည်း တစ်လုံးဝယ်ထားတာ...ခဏလေးနဲ့ပျက်သွားတယ်။ အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုရွှေခဲဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကို သွားပြပြီး ပြန်ပျင်ခိုင်းတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
Music & IT Development :: Category :: Knowledge Forum :: Mobile